Ngokuqinisekile wonke umuntu uyakhumbula ukuthi yiliphi uhlobo lwebhasi e-USSR. Ngokuyinhloko lawa angama-LAZ ne-Ikarus. Lezi zinsuku zazibhekwa njengenhloko yangempela embonini yezimoto. AbaseHungary benza amabhasi akhululekile futhi athembekile. Esihlokweni samanje, sizokhuluma nge-Ikarus-255. Leli bhasi lalikhiqizwa kusukela ngonyaka ka-72 ukuya kwangu-84. Imoto yafika esikhundleni se-250-th imodeli engasetshenziswanga, eyakhiwe kusukela eminyakeni engu-50. Ake sijwayelane nale bhasi elidumile.
Wonke amabhasi athunyelwe emaRiphabhulikhi e-USSR aqoshiwe ngokubomvu nokumhlophe. Kwakunjalo kuwo wonke amamodeli. Imoto ithola izibani ezengeziwe zamabhomu kanye ne-bumper entsha. Ukuhlelwa kwamafasitela kufakwe i-chrome. Umdwebo ofanayo oqhakazile uhlukanisa izingxenye ezimbili zemimoya emikhulu. I-janitors yayitholakala ngokuqondile. Futhi ngenhla i-black radiator grill Ikarus ebhalwe ngokuziqhenya. Ngezinye izikhathi imodeli ye-255th igcwaliswe nge-searchlight evela phezulu, eyanikeza umbala owengeziwe. Umzimba ngokwawo unamalungiselelo enqola, enezicabha zemishini. Engxenyeni yayo engezansi kukhona amabhokisi emithwalo eyengeziwe. Zombili ngakwesobunxele nangakwesokudla.
I-Ikarus-255 ingokwalabo beqembu elikhulu lamabhasi. Ngakho, ubude bayo buyi-10.97 amamitha, ububanzi - imitha eyi-2.5 ngokuqondile, nokuphakama - cishe amamitha amathathu. Ubukhulu be-wheelbase ngu-5.34 amamitha. I-Ikarus-255 yayihlaba umxhwele ngobukhulu, ngakho-ke ingahlala kwabalinganiselwa kwabangu-47. Kodwa-ke, umzimba omude awuwona amandla kuphela, kodwa futhi kune-overhangs emikhulu. Ngakho, ubukhulu bephambili kwakungamamitha angu-2,45. I-overhang engemuva ingamamitha angu-3.17. "I-Ikarus-255" yayinzima ukuqhuba emzini, ngakho kwakuvame ukuxhashazwa ngaphandle kwayo. Ngendlela, i-radius encane yokujika kwebhasi ingamamitha angu-22.4.
Amamodeli wangaphambilini we "Ikarus" asetshenziselwa i-archaic, flat panel of devices. I-Ikarus-255 (isithombe salon saloni ongabona ngezansi) ifakwe iphaneli yamuva eyenziwe nge-plastic plastic. Njengomhlobiso, kwavela umuthi omnyama. Isondo lokushayela likhulunywa ngamabili, ngaphandle kwezinguquko. Kudeshibhodi kwakuzo zonke izikali ezidingekayo. Futhi ngakwesobunxele kukhona i-unit control control, futhi ngakwesokudla (ekhoneni) umsakazo womsakazo angafakwa.
Ngokuqondene nabagibeli ngokwabo, banikezwa izihlalo zokukhanya ezikhululekile ezinama-headrests. Kwakukhona futhi i-armrest. On onobuhle olandelayo "Icarus" kwase kakade ukukhipha. Phezulu kwakuyi-shelf yezikhwama nezinye izinto. Izihlalo zahlelwa ngemigqa emibili. Emuva kuma-classic kwakungesi-sofa eqhubekayo. Itholakala kancane kakhulu kunezinye izihlalo. Lokhu akukwenziwe ngombono ongcono wabashayeli abathintekayo, kodwa ukuthola indawo yamandla. I motor on the Ikarus yayingemva. Ngendlela, ubude bomzimba womodeli wama-250-th wawungaphansi komitha owodwa kunamodeli angama-255-ngaphambili. Ukwamukela bonke abagibeli, kwakudingeka ukuletha izihlalo emuva emgqeni ngamunye. Futhi, ngokungafani ne-Ikarus yama-255, kwakungekho iminyango ye-pneumatic ne-efriji ngemuva. Ngakho-ke, i-250th yayisetshenziswa ikakhulukazi emigwaqweni emifushane. Okuhlukile kwakuyibhasi le-Ikarus-255 lokuguqulwa 250.59. Yayihlome izicabha zangaphambili zomoya ezivulekele ngaphakathi. Kodwa engemuva yayisesimweni.
Injini ye "Rab-MAN" ifakwe ebhasini. Kuyinto injini ye-diesel inline ene-turbocharger. Umthamo wokusebenza wendawo yamandla yayingu-10,350 cubic centimeters. Amandla amakhulu angama-220 amahhashi. Kodwa ipharamitha ebaluleke kakhulu ebhasi kwakuyi-torque. E-Ikarus ye-model ye-255th, yayingu-820 Nm ekubukeleni kwezinkulungwane ezimbili. Kungakhathaliseki ukuthi kungabonakalisa kanjani okungajwayelekile, umkhiqizi ngokusemthethweni uthatha izinga le-Euro-0 lemvelo kule injini. Ibhasi alizange lisetshenzisise izihlungi zezinhlayiyana kanye nezinhlelo zokujola.
Ukudluliselwa, ukuguquguquka, ukusetshenziswa
Imoto yayinezikhwama zokuhambisa ngesandla nge-single-plate clutch eyomile. Ingqikithi ebhokisini yayinezinyathelo ezingu-5, ngaphandle kokuhlukana. Ibhokisi, ngokungafani ne-injini, alikwenziwe njengamanje. Ngenxa yalokhu, abashayeli abaningi bakhononda mayelana nokuhamba kwamanzi amakhulu. Kanti futhi ngokuhamba kwesikhathi, izinhlelo zashintshwa nge-crunch.
Uma sikhuluma ngezinkomba ezinamandla, isivinini esikhulu sebhasi sasingamakhilomitha ayikhulu ngehora. Ukusheshisa amakhilomitha angu-60 ngehora kuthatha imizuzwana engu-22. Ngokuqondene nokusetshenziswa kwephethiloli, lapha idatha ihlukanisa. Umkhiqizi uthi mayelana no-19 amalitha ngamakhilomitha angu-100. Kodwa ngokwenza lokhu lesi sibalo silinganiselwa ku-27 amalitha, nangaphandle komuzi (lapho leli bhasi lisetshenziselwa amaphesenti angu-90 yesikhathi). Amandla agcinwe kwelinye ithangi cishe ngamakhilomitha ayizinkulungwane.
Mhlawumbe into ephawulekayo kakhulu ye-Ikarus yama-250 iyisakhiwo sokumiswa. AmaHungary asebenzisa uhlelo lwe-archaic, spring spring. Futhi amashidi ayekho kokubili okugxilwe ngaphambili nangemuva. Ukwehlisa izidakamizwa kwenziwa nge-hydraulic shock absorbers. Kwimodeli ye-255, ukumiswa kwomoya kwase kusetshenzisiwe kakade, ngenxa yokuthi i-Ikarus yayinqobile kakhulu futhi yabhekwa njengebhasi elikhululekile kulawo maxesha. I-steering-nut ne-booster hydraulic. Uhlelo lwe-Brake - uhlobo lugubhu. Kuyinto ephawulekayo, amapulangwe anciphisa kusuka emoyeni wokucindezela (okungukuthi, ama-brake ayengomoya).
Kukho cishe amakhophi anjalo asele ekuthengisweni. Izindleko zemodeli ethi "bukhoma" zigcinwa ezingeni eliphezulu - cishe ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-450. Esimweni sokubuyiselwa kungenzeka ukuthi uthenge izinkulungwane ezingu-200 nangaphansi. La mabhasi aphelile. Abaningi baye babola noma bahamba ngezimoto eziphukile. Ezebhizinisi, azifaneleki kahle. Izitolo ze-Ikarus azikakhiqizwa amashumi eminyaka, futhi kunzima ukuthola okuthile ekuqedeni. Eqinisweni, i-250th imbukiso yemamyuziyamu, i-rarity engakaze iphile kuze kube yilolu suku.
Ngakho, sithole ukuthi i-Ikarus yesibonelo sama-250 is. I-Ikarus ibhasi eliyingqayizivele, elinikezwe emazweni aseBaltic, i-RSFSR nezinye izifundazwe ngamasonto. Umshini wawusetshenziswe emigwaqweni ehlukene. Kulezi "Ikarus" abaningi bahamba isigamu sezwe. Ngeshwa, abasabonakali emigwaqweni yamadolobha ethu. Futhi yilabo abaphelelwa yithemba kuphela abakulungele ukuthatha ngaphansi kokubuyiselwa. Manje inqubo enjalo ingatholakala emnyuziyamu wezokuthutha abagibeli eMoscow naseSt. Petersburg. Ezindizeni, lezi amabhasi azikakhululwa isikhathi eside. Iningi lalo libhalwa ensimbi.
Oleg Divov - eqanjiwe namuhla